काफल पाकेसँगै किन कराउँछ ‘काफल पाक्यो चरी ? | सुदुरपश्चिम खबर
बेडू पाको बारो मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला‘’ भारतको उत्तराखण्ड लगायतको भेगमा प्रसिद्ध यो गीत स्व. मोहन चन्द्र उप्रेतीले लेखेका हुन् । उत्तराखण्डमा चर्चित रहेको यो गीतले काफलको महिमा र काफल पाकेसँगै आउने काफल पाक्यो चरीको व्याख्या गरेको छ । नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी मुलुकमा समेत विशेष रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
तर यसको वैज्ञानिक पक्ष अलिक अर्कै खालको छ । जैविक विविधता सम्बन्धी अध्येता कमल मादेन ‘काफल पाक्यो’भन्ने जस्तो स्वर दिने चरा एक खालको घुमन्ते चरा रहेको बताउँछन् । यसको स्वरमा त्यस्तो आवाज सुनिएको भए पनि यसले काफल पाक्यो भन्ने आवाज भने ननिकाल्ने मादेन बताउँछन् ।
काफलको ‍औषधीय गुणहरूः
काफल अमिलो–गुलियो एवं रसिलो फल हो । यो फलले जिब्रो मात्र लोभ्याउँदैन, यसमा औषधिय गुण पनि हुन्छ । विभिन्न समस्यामा काफलको दाना, बोक्रा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कानको रोग, आँखाको रोग, अनियमित मासिक स्राव, टाउको दुखाई आदिमा काफलको धुलो, बोक्रा आदिको औषधी बनाएर सेवन गर्दा लाभ मिल्ने बताइन्छ । यसैगरी दम, नपुंशकतामा समेत काफल उपयोगी हुन्छ । बाहिरी घाउचोट निको बनाउन काफलको बोक्राको धुलो प्रयोग गर्न सकिन्छ । (gnewsnepal बाट सभार)
यी उपाय अपनाउनुभयो भने तपाइको दाम्पत्य जीवन सफल हुन्छ !!